Luka Asɛmpa 19:1-48
Yesu kɔsraa Sakeo (1-10)
Mmɛnnaa du ho mfatoho no (11-27)
Yesu de nkonimdi kowuraa Yerusalem (28-40)
Yesu suu Yerusalem (41-44)
Yesu tew asɔrefi no ho (45-48)
19 Na Yesu kɔɔ Yeriko, na na ɔnam kurow no mu. 2 Ná ɔbarima bi wɔ hɔ a ne din de Sakeo. Ná ɔyɛ wɔn a wogyigye tow no mpanyimfo no baako, na na ɔyɛ osikani. 3 Ná ɔpɛ sɛ ohu Yesu, nanso nnipadɔm no nti, na ontumi, efisɛ na ɔyɛ onipa tiatiaa. 4 Enti otuu mmirika dii wɔn anim kɔforoo sikamɔɔ dua* sɛnea ɛbɛyɛ a obehu Yesu, efisɛ na Yesu rebetwam afa saa kwan no so. 5 Bere a Yesu duu hɔ no, ɔmaa n’ani so hwɛɛ soro, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sakeo, yɛ ntɛm si fam, efisɛ wo fi na ɛsɛ sɛ metena nnɛ.” 6 Ɛno nti, ɔyɛɛ ntɛm sii fam, na ɔde anigye gyee no kɔɔ ne fi sɛ ne hɔho. 7 Na bere a nkurɔfo no hui no, wɔn nyinaa kasakasae sɛ: “Ɔbarima debɔneyɛfo yi na wakɔsoɛ ne fi.”+ 8 Na Sakeo sɔre gyinaa hɔ, na ɔka kyerɛɛ Awurade sɛ: “Awurade, hwɛ! mede m’ahode fã bɛma ahiafo, na biribiara a masisi nkurɔfo agye no,* mɛbɔ ho mpɛn anan ama wɔn.”+ 9 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnnɛ, nkwagye aba fie ha, efisɛ ɔno nso yɛ Abraham ba. 10 Na onipa Ba no bae sɛ ɔrebɛhwehwɛ wɔn a wɔayera, na wagye wɔn.”+ 11 Bere a wɔretie eyinom no, ɔsan maa mfatoho bi, efisɛ na wabɛn Yerusalem, na na wɔn adwene yɛ wɔn sɛ, odu hɔ pɛ, Onyankopɔn Ahenni no bɛba.+ 12 Enti ɔkae sɛ: “Ɔdehye bi tuu kwan kɔɔ asaase bi so wɔ akyirikyiri+ sɛ ɔrekɔpɛ tumi a ɔde bedi hene* na wasan aba. 13 Na ɔfrɛɛ ne nkoa du maa wɔn mmɛnnaa* du ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ‘Momfa nyɛ adwuma nkosi sɛ mɛba.’+ 14 Nanso na ne manfo tan no, na wɔsomaa nnipa kɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Yɛmpɛ sɛ saa ɔbarima yi di yɛn so hene.’ 15 “Bere a onyaa tumi a ɔde bedi hene no,* ɔsan bae, na ɔfrɛɛ nkoa a ɔmaa wɔn sika* no sɛ wɔmmɛkyerɛ nea wɔde ayɛ adwuma anya.+ 16 Enti nea odi kan no bae, na ɔbɛkae sɛ: ‘Owura, manya mmɛnnaa du aka bɛnnaa baako a wode maa me no ho.’+ 17 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Mo, akoa pa! Esiane sɛ woadi ade ketewaa mu nokware nti, di nkurow du so tumi.’+ 18 Afei nea ɔto so abien no bɛkae sɛ, ‘Owura, manya mmɛnnaa anum aka bɛnnaa baako a wode maa me no ho.’+ 19 Ɔka kyerɛɛ oyi nso sɛ, ‘Wo nso, di nkurow anum so.’ 20 Na ɔfoforo bɛkae sɛ, ‘Owura, wo bɛnnaa a mede siee ntama mu no ni. 21 Nea ɛte ne sɛ, ná misuro wo, efisɛ woyɛ onipa a w’asɛm yɛ den; wofa nea womfa nsiei, na wutwa nea wungui.’+ 22 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Akoa bɔne, w’ankasa w’anom asɛm so na mibu wo atɛn. Sɛ́ wunim sɛ meyɛ onipa a m’asɛm yɛ den, mefa nea memfa nsiei, na mitwa nea mingui?+ 23 Ɛnde adɛn nti na woamfa me sika* no ankɔto sikakorabea? Anka meba a, megye na magye nsiho aka ho.’ 24 “Enti ɔka kyerɛɛ wɔn a wogyinagyina hɔ no sɛ, ‘Munnye bɛnnaa no mfi ne nsam, na momfa mma nea ɔwɔ mmɛnnaa du no.’+ 25 Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Owura, ɔwɔ mmɛnnaa du!’— 26 ‘Mereka akyerɛ mo sɛ, obiara a ɔwɔ bi no, wɔbɛma no bi aka ho, na nea onni bi no, nea ɔwɔ mpo, wobegye afi ne nsam.+ 27 Bio nso, momfa m’atamfo yi a na wɔmpɛ sɛ midi wɔn so hene no mmra ha, na mummekunkum wɔn wɔ m’anim.’” 28 Bere a ɔkaa eyinom wiei no, osiim a na ɔreforo akɔ Yerusalem. 29 Na bere a ɔbɛn Betfage ne Betania a ɛwɔ bepɔw a wɔfrɛ no Ngodua Bepɔw*+ no so no, ɔsomaa n’asuafo no mu baanu.+ 30 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ akuraa a mo ani tua yi ase, na mudu hɔ a, mubehu afurum ba bi a wɔamantam no a onipa biara ntenaa no so da. Monsan no, na momfa no mmra ha. 31 Na sɛ obi bisa mo sɛ, ‘Adɛn nti na moresan no?’ a, monka sɛ, ‘Awurade hia no.’” 32 Enti wɔn a ɔsomaa wɔn no kɔe, na wokohuu nea ɔka kyerɛɛ wɔn no pɛpɛɛpɛ.+ 33 Na bere a wɔresan afurum ba no, ne wuranom bisaa wɔn sɛ: “Adɛn nti na moresan afurum ba no?” 34 Ɛnna wɔkae sɛ: “Awurade hia no.” 35 Na wɔde afurum ba no kɔmaa Yesu, na wɔtotow wɔn ntaade nguguso guu no so, na Yesu tenaa no so.+ 36 Bere a Yesu rekɔ no, wɔde wɔn ntaade nguguso sesɛw ɔkwan no mu.+ 37 Bere a ɔbɛn ɔkwan a esian fi Ngodua Bepɔw no so pɛ, asuafo bebrebe no nyinaa fii ase dii ahurusi, na esiane anwonwade* a na wɔahu no nyinaa nti, wɔde nne kɛse yii Onyankopɔn ayɛ. 38 Wɔkae sɛ: “Nhyira ne nea ɔreba sɛ Ɔhene wɔ Yehowa* din mu! Asomdwoe wɔ soro, na anuonyam wɔ ɔsorosoro noho!”+ 39 Nanso, Farisifo bi a wɔwɔ nnipadɔm no mu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, ka w’asuafo no anim.”+ 40 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mereka akyerɛ mo sɛ, sɛ eyinom mua wɔn ano mpo a, abo bɛteɛm.” 41 Na bere a ɔbɛn Yerusalem no, ɔhwɛɛ kurow no, na osuu kurow no.+ 42 Ɛnna ɔkae sɛ: “Wo, sɛ ɛnnɛ, anka wunim nea ɛbɛma woanya asomdwoe a! Nanso seesei de, wɔde asie wo.+ 43 Efisɛ bere bi bɛba a w’atamfo de nnua a ano yɛ mfeamfeaa betwa wo ho ahyia te sɛ ɔfasu, na wɔbɛka wo ahyem, na wobefi afã nyinaa abɛtow ahyɛ wo so.+ 44 Na wɔde wo ne wo mma a wɔwɔ wo mu bɛhwehwe fam,+ na wɔrennyaw ɔbo a ɛda ɔbo so wɔ wo mu,+ efisɛ bere a wɔbɛhwɛɛ wo no, woanhu.” 45 Afei ɔkɔɔ asɔrefi hɔ, na ofii ase pam wɔn a wɔretɔn nneɛma no,+ 46 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Wɔakyerɛw sɛ, ‘Wɔbɛfrɛ me fi mpaebɔ fi,’+ nanso mo de, mode ayɛ baabi a akorɔmfo werɛmfo tetɛw.”+ 47 Ɔkɔɔ so kyerɛkyerɛe da biara wɔ asɔrefi hɔ. Nanso, na asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no ne nnipa no mu atitiriw no pɛ sɛ wokum no;+ 48 nso wɔannya kwan biara a wɔbɛfa so ayɛ saa, efisɛ nnipa no nyinaa de wɔn ho bataa ne ho tiee no.+
^ Anaa “ankye dua.”
^ Anaa “biribiara a mede nkontompo agye afi nkurɔfo hɔ no.”
^ Anaa “ɔrekɔpɛ ahenni.”
^ Greek bɛnnaa baako mu duru yɛ gram 340, na ɛne drakma 100 yɛ pɛ. Hwɛ Nkh. B14.
^ Anaa “ahenni no.”
^ Nt., “me dwetɛ.”